Ny fiaraha-miasan'ny Delta miaraka amin'ny TSA dia mandrindra ny fidirana, ny filaminana any amin'ny foiben'i Atlanta
Home » Lahatsoratra farany farany » teknolojia » Ny fiaraha-miasan'ny Delta miaraka amin'ny TSA dia mandrindra ny fidirana, ny filaminana any amin'ny foiben'i Atlanta
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • teknolojia • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Safidy mitarika indostrialy ho an'ny mpanjifa Delta's TSA PreCheck dia mampiasa teknolojia fankasitrahana endrika hamehezana ny traikefa amin'ny seranam-piaramanidina manomboka amin'ny sisiny mankany amin'ny vavahady.
Ny teknolojia vaovao dia manome ny mpanjifa fomba mahomby kokoa hamakivakiana ny seranam-piara-manidina - tsy aseho ny taratasy fandefasana taratasy na kara-panondrom-panjakana.
Ny mombamomba ny mpanjifa nomerika dia ny laharana pasipaorony sy ny TSA PreCheck na ny Global Entry fantatry ny mpitsangatsangana isa ary voamarin'ny teknolojia fanekena tarehy.
Ny fitaovam-pankatoavana endrika dia ho hita voalohany ao amin'ny South South Checkpoint any Atlanta amin'ny herinandro ho avy.
Ireo mpandeha fiaramanidina manana ny maha-mpikambana ao amin'ny TSA PreCheck ary isa an'ny Delta SkyMiles dia mety hanana safidy hiaina ny dia amin'ny seranam-piaramanidina haingana ao Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenen'i Hartsfield-Jackson Atlanta.
Naseho voalohany tao amin'ny toeram-pisavana Detroit tamin'ny fiandohan'ny 2021, Delta Air-dalana,'Ny traikefa momba ny dizitaly dia indostria voalohany miaraka amin'ny TSA PreCheck. Mivelatra ny traikefa Atlanta, manolotra ny mpanjifa fomba mahomby kokoa hamakivakiana ny seranam-piara-manidina - tsy aseho ny taratasy fandefasana taratasy na kara-panondrom-panjakana. Amin'ny fijerena fakan-tsary iray fotsiny, ireo mpanjifa mahafeno fepetra sy misafidy dia afaka manamarina kitapo mora foana sy mahomby, mandalo ilay Tsa PreCheck ny tsipika fiarovana ary hiditra ny fiaramanidiny.
Ny mombamomba ny mpanjifa nomerika dia ny laharana pasipaorony ary Tsa PreCheck na Global Entry fantatry ny mpitsangatsangana isa ary voamarina amin'ny alàlan'ny haitao famantaran-tarehy, izay manamarina ny mombamomba ny mpitsangatsangana amin'ny fantsom-piaramanidina. Ny fitaovan'ny fanekena tarehy dia ho hita voalohany ao Atlantany toeram-pisavana South Security Checkpoint amin'ny herinandro ho avy ary hanitatra ny fisafidianana ny kitapo sy ny fidinana alohan'ny faran'ny taona. Delta Air-dalana, mikendry ny hanitatra amin'ny tobim-pampiasana fanampiny amin'ny taona ho avy mba hahazoana antoka ny fivezivezena mitanjozotra tsy misy tohika manerana ny tamba-jotra.
"Ny fanitarana manokana ny mombamomba nomerika dia manosika an'i Delta dingana iray akaiky kokoa hanatratrarana ny vinanay amin'ny famoronana dia lavitra manokana sy mifandray tanteraka," hoy i Byron Merritt, Delta Air-dalana,'Filoha lefitry ny famolavolana marika. "Ny tanjonay amin'ny fanovana ny fotoana lehibe toy ny fiarovana sy ny fidirana ho traikefa tsy misy valiny dia ny manome fotoana ary miverina miverina amin'ny fotoana nankafizan'ny mpanjifa. Ny fanavaozana toy ny maha-nomerika dia ampiharina amin'ny fikasana hanova ny traikefa amin'ny fitsangatsanganana ho lasa dia fitsinjovana tena andrasan'ny mpanjifanay. ”
Ao amin'ny roa tonta Atlanta ary Detroit, ny mari-pahaizana nomerika eto an-toerana dia miorina amin'ny safidin'ny Delta efa misy amin'ny fitsangatsanganana iraisam-pirenena, izay natombok'i Delta nandritra ny dimy taona lasa izay ary niafara tamin'ny famoahana ny terminal biometrika voalohany voalohany tao Atlanta tamin'ny taona 2018.
Mound Zidone hoy:
Oktobra 20, 2021 ao amin'ny 16: 24
Tsy maintsy mijery ny tantara fotsiny ary manolotra firenena hafa…”Ny fahatoniana” sy ny “fanampiana ho an’ny mpanjifa” dia ny fomba nivarotan’i Shina ny famantarana ny tarehy tany amin’ny “tanàna manan-tsaina” sy ny rafitra naoty naoty mba hanandevozana ny olom-pireneny.